about Thabyay in MM - Thabyay Education Foundation
အဆင့်မြင့်ပညာရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးရှိ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုများ၊ တရားမျှတ၍ ကြီးပွားတိုးတက်မှုများအတွက် အဓိကကျသောကြောင့် မြန်မာလူငယ်လူရွယ်များအဆင့်မြင့်
နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ သပြေပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကို (၁၉၉၆) ခုနစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်အတွင်း လူငယ်များသည် ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်မြင့်မာ၍ တာဝန်သိတတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းကာတရားမျှတသော ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်များရရှိခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်များကိုဆွတ် ခူးနိုင်ရန်။
အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို သပြေပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း မှဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁။ Kant Kaw Education Center မှ TOFEL နှင်. IELTS စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင်ရာ ၌ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ၊ တက္ကသိုလ်ပညာဆည်းပူးရန် လိုအပ်သော အခြေခံပညာရပ်များ နှင်. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ဖွံ.ဖြိုးရေးသင်တန်းများကို ပို.ချသင်ကြားပေးနေပါသည်။
၂။ Thabyay E-learning Platform တွင် Educasia အမည်ဖြင်.သင်ရိုးညွန်းတမ်းပြုစုခြင်း
နှင်. Exam Preparation Outreach Program ဟူသော အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင်.စာမေးပွဲဖြေကြားခြင်း
ဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၃။ Scholarships and Student Support Department သည် Open Society Foundation Network Scholarship နှင်. Prospect Burma ကဲ.သို.သော ပညာသင်
ဆုများရရှိဖို.ရန် အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း နှင်. ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသား
များ နိုင်ငံခြားသို. ပညာတော်သင် သွားရာတွင်မရှိမဖြစ် သိထားသင်.သောအကြောင်းအရာများ
နှင်. ပက်သက်၍လည်း ၀န်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။
၄။ Mobilizing Myanmar and Experiential Learning Programs များမှတစ်ဆင့် မြန်မာပြည်တွင်း၌ ရှိသော ကျေးလက်ဒေသများမှ ဒေသခံခေါင်းဆောင်များ နှင်. အဖွဲ.အစည်းများကို စွမ်းရည် မြှင်.တင်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
﻿Thabyay’s programs are designed to support students and key community and civil society workers to acquire the skills, knowledge, networks and assistance to foster self-directed, sustainable development in their communities and the wider society.﻿
﻿﻿Staff & Teachers﻿﻿
ကိုပို၍သိရှိလိုပါက info@thabyay.org သို့အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။ (သို့ မဟုတ်) အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်းသပြေ၏
ကမာရွက်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန် +၉၅(၁)၅၀၂၈၈၄